Fanamboarana varahina vita amin'ny varingina vita amin'ny varahina nokleary vita amin'ny varotra - China Factory - Cixi Wenap International Trading Co., Ltd
Home > Products > Fitaovana metaly > Kitapo vita amin'ny varahina miaraka amin'ny fanafanana vita amin'ny Nickel
Product Introduction of the Nut Nose with Nickel Plated Finishing
Ny varahina dia efa nampiasaina ho toy ny vata fampangatsiahana ho an'ny trano sy indostria. Ny fitaovana dia manana toetra maro izay mahatonga azy io ho vahaolana mahomby indrindra. Ny rà dia tena maharitra ary mahatonga azy ireo ho tsara indrindra amin'ny asa fanangonam-bokatra izay mitaky fitaovana maharitra sy maharitra. Tsy mora ny mihazakazaka na misaina. Afaka manome ny sombin-doko rehetra amin'ny fantsom-pifandraisana isika mba hampifandraisana ny tavoahangy pex-al-pex, pipa pe-al-pe, pipa pex, ect.
Product Parameter momba ny mavo vita amin'ny varahina miaraka amin'ny fanaovan-jiro nopetahana
3/8 & quot; -4 & quot;
Mampifandray amin'ny tavoahangy PEX-AL-PEX sy PE-AL-PE, ect.
Ao anaty kitapo matevina matevina, ao anaty baoritra any ivelany
Ny endriky ny vokatra sy ny fampiharana ny voan-kozatra vita amin'ny varahina miaraka amin'ny fanaovan-jiro nopetahana
1) Materia: varahina (misy 57% varahina), varahina varahina
2) Fampiharana: Mampifandray amin'ny fantsona PEX-AL-PEX sy PE-AL-PE, ect.
3) Natao tamin'ny teknikam-pamokarana hafa
4) Tsara tombo-kase
5) Fitaovana mora sy mora
6) Ny rafitra optimisma
7) Fomba feno
8) Ny kalitao tsara sy ny tolotra tsara indrindra
fampiharana:Mampifandray amin'ny tavoahangy PEX-AL-PEX sy PE-AL-PE, ect.
Toro-hevitra momba ny vokatra vita amin'ny varahina nopetahana vita amin'ny Nickel
Packaging Details:Ao anaty kitapo matevina matevina, ao anaty baoritra any ivelany.
Hot Tags: Fanamboarana varahina vita amin'ny varahina nokleary, China, mpanamboatra, mpamatsy, orinasa, vita avy any China, mividy, mividy, maody, an-tapitrisany, volavola, vidin'ny vidin-tsolika, vidiny, avo lenta
Mainty miaraka amin'ny fanafanana Nickel PlatedNickel Plated Brass Check Nut